ထုတ်ကုန်များပေးသွင်း & စက်ရုံ - တရုတ်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများ
လျှပ်စစ် connector ကို, (တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဆိပ်ကမ်းများ, ပလပ်, ဒါမှမဟုတ် interfaces အဖြစ်လူသိများ) လျှပ်စစ်ဆားကစ်အတူတကွပူးပေါင်းများအတွက်ကိရိယာ။ ကျနော်တို့က D-ခွဲ, fiber optic, မော်တော်ကား, မြို့ပတ်ရထား, အသံနှင့်ဗီဒီယို, RF, ဆက်သွယ်ရေး, ပါဝါ, နှင့် USB အပါအဝင်အားလုံးအမျိုးအစားများ connectors, ရှိသည်။ ငါတို့သည်လည်း connector ကိုဆိပ်ကမ်းနှင့် terminal ကိုလုပ်ကွက်များအဖြစ် backshells အပေါင်းတို့နှင့်အမျိုးအစားများဆက်စပ်ပစ္စည်း၏ကြီးမားသောရွေးချယ်ရေးသယ်။
AV စနစ် Connector
DC က Connector
အမျိုးသမီး Header ကို
PH သည် Connector
pin Header ကို
က Short-circuit ကိုစာလုံးကြီး
terminal ကို Block Connector
မှာ USB Type-C ကို Connector
XIDA အီလက်ထရောနစ် ROM ကိုချစ်ပ်များနှင့် RAM နှင့်တိုင်းအမျိုးမျိုး၏ DRAM ချစ်ပ်, Flash ကိုကတ်များ FIFO, မှတ်ဉာဏ် module တွေနှင့်ပိုပြီးအပါအဝင်တိုင်းလျှောက်လွှာအဘို့မှတ်ဉာဏ်ချစ်ပ်, ကတ်များနှင့်အထူးပြုမှတ်ဉာဏ် module တွေ၏ကြီးမားသောရွေးချယ်ရေးစျေးဝယ်။
စွမ်းရည်စီ, ဒေတာဘတ်စ်ကားအကျယ်, access ကိုအချိန်, လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဗို့အား, ထုတ်ပိုး, pin ကိုရေတွက်နှင့်ပိုပြီး။ အင်တာဖေ့စအမျိုးအစားများကျယ်ပြန့်မျိုးစုံအဘို့မှတ်ဉာဏ်ထုတ်ကုန်ကိုရှာပါနှင့်ကြမ်းတမ်းမှတ်ဉာဏ်အစိတ်အပိုင်းများအပါအဝင် / Write စစ်ဆင်ရေးတောင်းဆိုချက်တွေ, ဖတ်ပါ။ ကျနော်တို့မှတ်ဉာဏ်ဆာဗာများအတွက်သင့်လျော်သောပစ္စည်းများ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာ, လူနေအိမ်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှု applications များ, နှင့်ပိုပြီးသိုလှောင်။
programmable ယုတ္တိဗေဒ device ကို
တစ်ဦးကသည် Programmable ယုတ္တိဗေဒကိရိယာ (PLD) မှုကြီးကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ဆားကစ်တည်ဆောက်ဖို့အသုံးပြုထားတဲ့အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ function ကိုရှိပါတယ်တဲ့ယုတ္တိဗေဒတံခါး, နှင့်မတူဘဲတစ် PLD ထုတ်လုပ်ခြင်း၏အချိန်မှာ undefined function ကိုရှိပါတယ်။ အဆိုပါ PLD ကပရိုဂရမ်ရမည်ဖြစ်သည်တိုက်နယ်အတွက်သုံးနိုင်တယ်မီ, သည်, reconfigured ။
4000 စီးရီး Logic Chip
74 စီးရီး Logic Chip
ပါဝါကိုစီမံခန့်ခွဲမှု integrated circuits
(ယူနစ်အဖြစ်အာဏာကိုစီမံခန့်ခွဲမှု ICS သို့မဟုတ် PMICs သို့မဟုတ် PMU) ဆားကစ်ပေါင်းစည်းပါဝါကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအိမ်ရှင်စနစ်၏တန်ခိုးအားလိုအပ်ချက်များကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ဆားကစ် (သို့မဟုတ် system-on-a-chip ကို device အတွက်စနစ်တစ်ခုပိတ်ပင်တားဆီးမှု) ပေါင်းစည်းနေကြသည်။ ထို့ကြောင့် PMIC သို့သော်အများဆုံးအီလက်ထရောနစ်ပါဝါပြောင်းလဲခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာအာဏာကိုထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအချို့ကိုပုံစံတို့ပါဝင်သည်, ချစ်ပ်များ၏ကျယ်ပြန့်ဖို့ကိုရည်ညွှန်းသည်။ တစ်ဦးက PMIC မကြာခဏလိုအပ်သောနေရာပမာဏကိုလျော့ချဖို့ထိုကဲ့သို့သောမိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်ခရီးဆောင်မီဒီယာပလေယာအဖြစ်ဘက်ထရီ-operated ထုတ်ကုန်များတွင်ပါဝင်သည်။
AC-DC ကပါဝါ Module
DC-DC ကပါဝါ Module
Power က Monitor Chip
ပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှု Chip switching
့ Analog chip ကိုဆီမီးကွန်ဒတ်တာပစ္စည်းတစ်ခုတည်းအပိုင်းအစအပေါ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သေးသေးလေးအီလက်ထရောနစ် Analog စ circuits များအစုတခုဖြစ်ပါတယ်။
Analog စချစ်ပ်များ၏ဆားကစ်အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရမှတ်မှာဗို့အားနှင့်လက်ရှိအချိန်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ခြားနားသည်။ ဆနျ့ကငျြ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ချစ်ပ်သာမျှအလယ်အလတ်တန်ဖိုးများနှင့်အတူ discrete အဆင့်ဆင့်မှာ voltages ကိုသို့မဟုတ်ရေစီးကြောင်းကိုသုံးပါနှင့်ဖန်တီးပါ။ transistors အပြင်, Analog စချစ်ပ်ကိုမကြာခဏဒစ်ဂျစ်တယ်ချစ်ပ်ပုံမှန်အားဖြင့်လုပ်ပေးထက် passive ဒြပ်စင် (inductors / Capacitors / resistors) ၏ပိုကြီးတဲ့အရေအတွက်ကရှိသည်။ inductors ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အရွယ်အစားရှောင်ကြဉ်လေ့နှင့်အတူတူတစ်ဦးကို transistor နဲ့ capacitor တစ်ခု inductors ၏လုပျငနျးလုပျဆောငျနိုငျပါသညျ။ (ဒီနည်းလမ်းဟာ CFL များတွင်အသုံးပြုလျှင်, သင်သည်အီလက်ထရောနစ်လှေငြိမ်ရ။ )
အင်နာလော့ချစ်ပ်လည်းအချို့သော Analog စလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအစားထိုးဒစ်ဂျစ်တယ်ယုတ္တိဗေဒဒြပ်စင်ဆံ့နိုငျတယျ, ဒါမှမဟုတျ chip ကိုတစ်မိုက်ခရိုနှငျ့ဆကျသှယျခွင့်ပြုပါရန်။ ဤအကြောင်းကြောင့်နှင့်ယုတ္တိဗေဒလေ့ CMOS နည်းပညာကို အသုံးပြု. အကောင်အထည်ဖော်ကတည်းကဤချစ်ပ်ထိုကဲ့သို့သော Freescale, Texas Instruments, STMicroelectronics နှင့်အခြားသူများအဖြစ်ကုမ္ပဏီများက BiCMOS ဖြစ်စဉ်များကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါကရောထွေးဆစ်ဂနယ်အဖြစ်လူသိများပြီးဒီဇိုင်နာအဆိုပါချစ်ပ်တွင်ပိုမိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထည့်သွင်းခွင့်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးကျေးဇူးများအချို့မှာဝန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, လျှော့ချအစိတ်အပိုင်းများကိုရေတွက်ခြင်းနှင့်ပိုမိုမြင့်မားယုံကြည်စိတ်ချရပါဝင်သည်။
သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်သန့်စင်သော Analog စချစ်ပ်အများအားဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ချစ်ပ်တွေနဲ့အစားထိုးခဲ့ကြသည်။ analog ချစ်ပ်နေတုန်းပဲနမူနာမှုနှုန်းလိုအပ်ချက်များကိုမြင့်မားပါဝါပလီကေးရှင်းအကောင့်နှင့် transducer interfaces မှာ wideband အချက်ပြမှုများဘို့လိုအပ်သည်။ လယ်ပြင်၌သုတေသနနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးထွားခြင်းနှင့်အကြံထမြောက်ရသောအဖို့ရောက်နေပါတယ်။ သက်တမ်းရှည်နဲ့လူသိများတဲ့ Analog စချစ်ပ်များ၏ဥပမာအချို့ကတော့ 741 စစ်ဆင်ရေးအတွက်ချဲ့ထွင်လျက်, 555 timer နေရာမှာရှိပါတယ်။
power supply ချစ်ပ်လည်း Analog စချစ်ပ်ဖြစ်စဉ်းစားနေကြသည်။ သူတို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်စနစ်ရှိအခြားချစ်ပ်များအတွက်ကောင်းစွာ-စညျးမဉျြးစညျးကမျး output ကိုဗို့အားထောက်ပံ့ရေးထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးအီလက်ထရောနစ်စနစ်များကိုလျှပ်စစ်ပါဝါလိုအပ်ကတည်းက power supply ICS PMICs သူတို့အားစနစ်များအရေးကြီးသောဒြပ်စင်ဖြစ်ပါသည်။
A / D ကိုကူးပြောင်းခြင်း Chip
analog ပြောင်းလဲမည် Chip
လက်ရှိ Monitor Chip
: D / A ကူးပြောင်းခြင်း Chip
ဒစ်ဂျစ်တယ် Potentiometers Chip
အီလက်ထရောနစ်နှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖျူးထားတဲ့လျှပ်စစ်ပတ်လမ်း၏လက်ရှိကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုကျော်ပေးလည်ပတ်တဲ့လျှပ်စစ်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိရိယာဖြစ်သည်။ ယင်း၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းအားဖြင့်လက်ရှိကြားဖြတ်ကြောင့်မှတဆင့်သည့်အခါသိပ်လက်ရှိစီးဆင်းမှုအရည်ပျော်တဲ့သတ္တုဝါယာကြိုးသို့မဟုတ်ချွတ်သည်။ ဒါဟာယဇ်ပူဇော်ကိရိယာ; တစ်ဦးဖျူး operated ထားပြီးတစ်ကြိမ်ကတစ်ပွင့်လင်းတိုက်နယ်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အစားထိုးသို့မဟုတ် rewired, အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. ရမည်ဖြစ်သည်။
ဖျူးလျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာများ၏အစောပိုင်းကာလကနေမရှိမဖြစ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိရိယာများအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ယနေ့လျှောက်လွှာပေါ် မူတည်. စွမ်းရည်များနှင့်တုန့်ပြန်ကြိမ်ခြိုးဖောကျသတ်သတ်မှတ်မှတ်လက်ရှိနှင့်ဗို့အား ratings ရှိသည်သောကွဲပြားခြားနားသောဖျူးဒီဇိုင်းများထောင်ပေါင်းများစွာ၏, ရှိပါတယ်။ ဖျူး၏အချိန်နှင့်လက်ရှိလုပ်ငန်းလည်ပတ်ဝိသေသလက္ခဏာများမလိုလားအပ်သောနှောင့်အယှက်မရှိဘဲလုံလောက်တဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရွေးချယ်နေကြသည်။ ဝါယာကြိုးစည်းမျဉ်းများများသောအားဖြင့်အထူးသဖြင့်ဆားကစ်တစ်ခုအများဆုံးဖျူးလက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သတ်မှတ်။ က Short ဆားကစ်, Overload, မတိုက်ဆိုင်ဝန်, ဒါမှမဟုတ်စက်ကိုပျက်ကွက်ဖျူးစစ်ဆင်ရေးများအတွက်ချုပ်အကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြသည်။
တစ်ဦးကဖျူးတစ်ပျက်ယွင်းနေမှုစနစ်ကနေအာဏာကိုဖယ်ရှားခြင်းတစ်ခုအလိုအလျောက်နည်းလမ်းဖြစ်၏ မကြာခဏ Ads (ထောက်ပံ့ရေး၏အလိုအလျောက်အဆက်ဖြုတ်) ဖို့အတိုကောက်။ တိုက်နယ်အနိုင်အထက်ဖျူးတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာဒီဇိုင်းဖြေရှင်းချက်အဖြစ်အသုံးပြုပေမယ့်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောလက္ခဏာများရှိနိုင်ပါသည်။
ဖျူး Clip / ထိုင်ခုံ
Glass ကို Tube ဖျူး
ဖြောင့် Plug ဖျူး
Qualcomm မှ Atheros
audio Interface ကို Chip
သည် RS-485 / သည် RS-422 Chip
USB မှတ် Chip
ကြိုးမဲ့ Chip transmit-လက်ခံရရှိ
ချဲ့စက်များ / Linear ဖုန်းများအတွက်
တစ်ခုကအသံချဲ့စက်တစ်ခုလျှပ်စစ်အချက်ပြမှု၏လွှဲခွင်တိုးပွါးကြောင်းအီလက်ထရွန်းနစ်ကိရိယာဖြစ်သည်။ သူတို့ကထိထိရောကျရောတစ်ဗို့သို့မဟုတ်လက်ရှိ input ကို signal ကိုဖြစ်စေများကိုချဲ့ထွင်ရန်သူတို့၏စွမ်းရည်ကိုရိုသေလေးစားမှုအတွက်ခွဲခြားထားပါသည်။ တစ်ဦးကဗို့အားအသံချဲ့စက်ကတော့ input ကိုဗို့အားအချက်ပြချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ပိုကြီးတဲ့ output ကိုဗို့အားထုတ်လုပ်သည်။ ထို့အပြင် transimpedance ချဲ့စက်များအဖြစ်လူသိများလက်ရှိချဲ့စက်များ, ထိုသွင်းအားစုမှာရေစီးကြောင်းနှင့် output ကိုဝန်တစ်ဗို့အားခံစား။ Transconductance နှင့် Transresistance အသံချဲ့စက်လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်ကဒီသက်ရောက်မှုကို - တစ်ဦး input ကိုဗို့သို့မဟုတ်လက်ရှိအသီးသီးပိုကြီးတဲ့ output ကိုလက်ရှိသို့မဟုတ်ဗို့အားထုတ်လုပ်သည်။
တစ်ဦးအသံချဲ့စက်တစ်ခုမှာ key ကို performance ကို parameter သည်ယင်း၏ linear, ဒါမှမဟုတ်တိကျစွာက output မှာအချိန်ဒိုမိန်းအတွက်တူညီသောပုံသဏ္ဍာန် signal ကိုအတူ input ကိုကိုယ်စားပြုရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအဓိကစွမ်းဆောင်ရည် parameters များကိုအဆိုပါကွပ်မျက်မှုနှုန်း, အကြိမ်ရေတုံ့ပြန်မှု, ဆူညံသံများနှင့်အမြတ် bandwidth ကိုပါဝင်သည်။
တစ်ဦးက, AB, B, C, D, နဲ့အီးအဆိုပါလူတန်းစားအတွက် input ကိုတစ်ဦး sinusoidal waveform လျှင်တစ်ခု output ကို signal ကိုတချက်သံသရာရှိပါတယ်အပြောင်းအလဲပမာဏကိုကိုယ်စားပြုအဖြစ်ချဲ့စက်များခွဲခြားထားပါသည်။ ပို linear တစ်ဦးအသံချဲ့စက်, အောက်ထိုပုံပျက်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ Class A အရှိဆုံး linear နှင့်လူတန်းစားကို C အနည်းဆုံး linear ဖြစ်ပါတယ်။ Class C အသံ application များအတွက်မသင့်တော်ကြောင်းနှင့်ပုံမှန်အား RF က transmitter လိုထုတ်ကုန်များထဲမှာအသုံးပြုသည်။ အတန်း D နှင့် E ကိုထိရောက်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အထွက်မှာ input ကို waveform ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက်သဟဇာတပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု, မျိုးစုံထောက်ပံ့ရေးရထားလမ်း switching, complimentary output ကိုနည်းစနစ်များနှင့် PWM နှင့်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်-Sigma မော်ဂျူင်အထွက်ဆားကစ်အဆင့်ဆင့်အသုံးချနိုင်မချဲ့စက်များ switching နေကြသည်။
FET Input ကိုချဲ့ထွင်
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Wide Band စစ်ဆင်ရေးအတွက်ချဲ့ထွင်
ရှိ Instrumentation စစ်ဆင်ရေးအတွက်ချဲ့ထွင်
Keyswitches / Relay
တစ်ဦးက keyswitch ကီးဘုတ်ပေါ်မှာသော့အတှကျအသုံးပွုသေးငယ်တဲ့ switch ရဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားကြောင့်သူတို့အပေါ်မှာအဆက်အသွယ်တွေနဲ့ပလပ်စတစ်၏စာရွက်များကိုအသုံးပြုပြီးအများဆုံးခေတ်သစ်ကီးဘုတ်မှအကြီးအကျယ်သုံးစွဲခြင်းထဲကယခု
Key ကို switch ကိုလည်းများသောအားဖြင့်အိမ်ထဲမှာသူခိုးနှိုးဆော်သံဆားကစ်များတွင်အသုံးပြုမယ့်သော့ချက်က operated တစ် switch ကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည်။ တစ်ဦးကကားကိုစက်နှိုးလည်းဒီ type တစ်ခု switch ကိုဖြစ်ပါတယ်။
relays များအနေနဲ့လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများကထက်ကိုယ်တိုင် switch ကိုမဖွင့်သို့မဟုတ်ပိတ်နေဖြင့် actuated နိုင်လြှပျစစျ switches များဖြစ်ကြသည်။ ဒီအသေးငယ်တဲ့ signal ကိုတစ်ဦးသိပ်ပိုကြီးတဲ့လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများအတွက်တံခါးစောင့်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ high-ပါဝါ signal ကိုကျော်နိမ့်အာဏာကိုထိန်းချုပ်မှုရှိသည်ဖို့စွမ်းရည်သူတို့ကိုထိုကဲ့သို့သောထင်ရှားတဲ့လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုမှန်ကန်စေသည်အရာဖြစ်တယ်။
transistors စိတ်ကြွလမ်းဆုံ (BJT) ပုံစံ, သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုလေ့အဖြစ် complimentary သတ္တု-အောက်ဆိုဒ်-semiconductor (CMOS) တွင်ဖန်ဆင်းနိုင်သုံး-terminal ကို devices များဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ဟာ PNP သို့မဟုတ် NPN configuration ကိုဖြစ်စေများတွင် n-type နှင့် p-type ကိုတစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းတွေ adjoining အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနေကြသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဗို့အားလက်ရှိရှိရာကို transistor လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအလားတူ switch တစ်ခုအတွတ် device ကိုမှတဆင့်စီးဆင်းခွင့်ပြုနေတဲ့တံခါးဝ terminal ကိုအသုံးချခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကယုတ္တိဗေဒကိုမြို့တံခါးနှင့်ဘဏ္ဍာ data တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်တွေအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ analog ဆားကစ်ချဲ့စက်များနှင့်လှိုကိုဖန်တီးရန်သူတို့ကိုအသုံးပြုပါ။
တစ်ဦးက diode ဘယ်နေရာမှာမဆိုကို p-type ကိုတည်ရှိခြင်းနှင့် n-type ကိုတစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းတွေတိုက်ရိုက်အချင်းချင်း adjoined ဖြစ်ကြောင်းနှစ် terminal ကိုကိရိယာဖြစ်သည်။ အဆိုပါ diode ရဲ့တံခါးခုံကိုဗို့အားကိုကျော်လွန်သည်အထိယင်း anode မှတစ်ဦးအပြုသဘောဗို့အားလျှောက်ထားခြင်းမဆိုသိသာလက်ရှိထုတ်လုပ်မည်မဟုတ်။ တံခါးခုံကိုဗို့အားကိုကျော်လွန်နေသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်လက်ရှိအဆိုပါ cathode ဖို့ anode ကနေစီးဆင်းခွင့်ပြုပါလိမ့်မည်ဒါပေမယ့် diode အများဆုံးအခြေအနေများအောက်၌ anode ဖို့ cathode ကနေလက်ရှိစီးဆင်းမှုပိတ်ဆို့ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာစသည်တို့ကိုအလင်းရင်းမြစ်များသကဲ့သို့, AC-DC ကထရန်စဖော်မာ, ရေဒီယို, Electro-ငြိမ်ဥတု (ESD) ဆားကစ်အတွက်အသုံးပြုကြသည်
ကျနော်တို့အပေါက်, ညှပ်, potentiometers နှင့် rheostats မှတဆင့်တစ်ခုတည်းတစ်ခုတည်းမျက်နှာပြင်အပါအဝင်အားလုံး application များအတွက် resistors mount, အဖြစ်ပစ္စည်းများ, ကွန်ရက်များနှင့် Array ကိုအမျိုးမျိုးနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများရှိသည်။
တစ်ဦးက resistor တိုက်နယ်မှတဆင့်လျှပ်စစ်လက်ရှိ၏စီးဆင်းမှုကိုကန့်သတ်သို့မဟုတ်ထိန်းညှိတဲ့ passive လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ V ကို = IR: လက်ရှိအုမ်း၏တရားမှတဆင့်တွက်ချက်သည်။ ခုခံတန်ဖိုးသည်းခံစိတ်နှင့်တခါတရံတွင်ပင်အပူချိန်ကိန်းအတွက်အစိတ်အပိုင်းများ၏ဘက်မှာရောင်စုံကြိုးနှင့်ချည်နှောင်တဲ့စီးရီးများကညွှန်ပြအရောင်ကုဒ်, ဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
resistors တစ် diode မှတဆင့်လက်ရှိစီးဆင်းမှုကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်လိုင်းကိုရပ်ဆိုင်းရန်နှင့်ထင်ဟပ်တားဆီးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ဦးကတစ်ဦးကို output ဗို့အားအချိုးကျတော်လှန်ရေးတန်ဖိုးများကိုထုတ်လုပ်မယ့်ဗို့ Divide ဖန်တီးရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးကယေဘုယျ-ရည်ရွယ်ချက် input ကို / output ကို (GPIO) transceiver ကို၎င်း၏ output ကိုကြီးမားတဲ့ဆွဲ-up, ဒါမှမဟုတ် GPIO တက်ကြွဖြစ်လာသည့်အခါအသီးသီးတွင်ကြောင်းဆွဲထုတ်-Down resistor များကသတ်မှတ်ထားရှိနိုင်ပါသည်။
resistors ကာဗွန်ပေါင်းစပ်ကာဗွန်ရုပ်ရှင်, သတ္တုရုပ်ရှင်နှင့်ဝါယာကြိုးဒဏ်ရာအပါအဝင်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနေကြသည်။ စက်မှုဇုန် applications များအာဏာကြီးမားသောပမာဏပျောက်ကွယ်သွားနိုင်စွမ်းဖြစ်သူတို့ကိုလိုအပ်နိုင်ပါသည်သော်လည်းစားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်, အသေးစားနှင့်တိကျသောဖြစ်သူတို့ကိုမလိုအပ်, ဒါသူတို့ပိုကြီးတဲ့ဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်။
လက်ရှိ Sensing resistors
တိုက်ရိုက် Plug ချန်လှပ်
LED မီးအိမ် resistors
သတ္တု glaze resistors
metallic ရုပ်ရှင်ပွဲတော် resistors
MOF MO ကို
patch က Ultra-အနိမ့် Resistance resistors
ထူးအိမ်သင်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Precision chip resistors
ဉသြသံ / နာယက / MIC
တစ်ဦးကဉသြသံသို့မဟုတ် beeper, စက်မှုလြှပျစစျ, ဒါမှမဟုတ်များကို piezoelectric (တိုတောင်းဘို့ piezo) ဖြစ်ရသောအသံအချက်ပြကိရိယာဖြစ်ပါတယ်။ ဉသြသံနှင့် beepers ၏ပုံမှန်အသုံးပြုမှုနှိုးဆော်သံကိရိယာတိုင်မားနှင့်ထိုကဲ့သို့သော mouse ကိုကလစ်နှိပ်သို့မဟုတ် keystroke အဖြစ်အသုံးပြုသူ input ကို၏အတည်ပြုချက်ကိုပါဝင်သည်။
နာယကအသံကထုတ်လုပ်ထားတဲ့လြှပျစစျကိရိယာဖြစ်သည်။ ဒါဟာကွန်ပျူတာစပီကာ, ဒစ်ဂျစ်တယ်စပီကာ, electrostatic လော်စပီကာ, အပြည့်အဝ-range ကိုစပီကာ, ဦးချိုလော်စပီကာ, ဒါပေါ်မှာအသံချဲ့စက်, Magnetostatic လော်စပီကာနှင့်ပါဝင်သည်။
မိုက်ခရိုဖုန်းလျှပ်စစ်အချက်ပြသို့အသံကအချက်ပြမှုများကိုပြောင်းပေးထားတဲ့စွမ်းအင် converter ဖြစ်ပါတယ်။
ဘက်ထရီကားများနှင့်ကုန်တင်ကားများတွင်အသုံးပြုကြီးမားခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီရန်နှင့်အကြီးဆုံးအစွန်းရောက်မှာစမတ်ဖုန်းများတွင်အသုံးပြုသေးငယ်ပါးလွှာဆဲလ်အခွင့်တန်ခိုးကိုကြားနာအကူအညီအထောက်အပံ့များနှင့်နာရီဖို့အသုံးပြုသေးသေးလေးဆဲလ်ထံမှများစွာသောပုံစံမျိုးစုံနှင့်အရွယ်အစားအတွက်လာ, ကြီးမားဘက်ထရီဘဏ်များ၏အရွယ်အစား တယ်လီဖုန်းဖလှယ်မှုနှင့်ကွန်ပျူတာဒေတာစင်တာများအဘို့အသင့်အနေအထားသို့မဟုတ်အရေးပေါ်ပါဝါပေးခန်း။
Q & J ကို
ဘက်ထရီကွက် / ဘက်ထရီအခြေစိုက်စခန်း
ပါဝါစ Adapter ကို
capacitors လျှပ်စစ်လယ်ကွင်း၏ပုံစံအတွက်လျှပ်စစ်သံလိုက်စွမ်းအင်ကိုသိုလှောင်နှစ်ခုဆိပ်ကမ်းနဲ့ passive လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြသည်။ Terminal ကသူတို့ကိုအကြားတစ်ဦး dielectric ပစ္စည်းရှိသည်နှစ်ခုကူးမှုပြား connect လုပ်ထားကြပါတယ်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ကူးမှုပြားတခုတခုအပေါ်မှာလျှပ်စစ်တာဝန်ခံသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ dielectric ပစ္စည်းအားဖြင့်ကွဲကွာအဆိုပါတရားစွဲဆိုပြားလျှပ်စစ်လယ်ကိုဖန်တီးပါ။
capacitance ယင်း၏ဆိပ်ကမ်းမှလျှောက်ထားပေးထားသောဗို့များအတွက်သိမ်းဆည်းထားလျှပ်စစ်တာဝန်ခံပမာဏကိုညွှန်ပြတဲ့ capacitor တစ်ခု parameter သည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ farads (F) တွင်တိုင်းတာသည်။ ဥပမာ, capacitance နှစ်ဆ (ဆိပ်ကမ်းမှာပေးထားသောစဉ်ဆက်မပြတ်ဗို့များအတွက်) သိမ်းဆည်းထားလျှပ်စစ်တာဝန်ခံနှစ်ဆပါလိမ့်မယ်။
capacitors သုံး-layer ကိုစပယ်ယာ dielectric စပယ်ယာဖွဲ့စည်းပုံမှာများအတွက်အသုံးပြုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများအပေါ်အခြေခံပြီးခွဲခြားရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သတ္တုနှင့်အတူသူတို့အား dielectric Electrolyte တွေပစ္စည်းများ Electrolytic Capacitor လို့ခေါ်ပါတယ်; သတ္တုကြွေသတ္တုမဟုတ်သော Polarized ဖြစ်ကြောင်းသူများသည်လည်းကောင်းအပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောဗို့အားချိတ်ဆက်ထားစေခြင်းငှါစသည်တို့ကိုကြွေ capacitors ခေါ်နေကြသည်။ သူတို့သဘောကွဲလွဲနေတယ်ဆိုရင်သူတို့ကအပြုသဘော terminal ကိုထုပ်ပိုးပေါ်မှတ်သားထားကြောင်းနှင့်အတူတစ်ဦးအပြုသဘောဗို့အားချိတ်ဆက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
Monolithic ကြွေ Capacitor
Multilayer ကြွေ Capacitor
အစိုင်အခဲ Electrolytic Capacitor
တစ်ဦးကကြည်လင်လှိုတစ်တိကျသောကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူလျှပ်စစ်အချက်ပြမှုကိုဖန်တီးရန်များကို piezoelectric ပစ္စည်းတစ်ခုတုန်ခါကြည်လင်၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုကိုအသုံးပြုထားတဲ့အီလက်ထရောနစ်လှိုဆားကစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကြိမ်နှုန်းကိုမကြာခဏဒစ်ဂျစ်တယ်ဘက်ပေါင်းစုံဆားကစ်တစ်ခုတည်ငြိမ်နာရီ signal ကိုပေးရန်နှင့်ရေဒီယိုက transmitter နှင့်အသံဖမ်းများအတွက်ကြိမ်နှုန်းတည်ငြိမ်ရန်, လင်းကျောက်နာရီ၌ရှိသကဲ့သို့, အချိန်ခြေရာခံစောင့်ရှောက်ရန်အသုံးပြုသည်။ အသုံးပြုသောများကို piezoelectric ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု၏အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားလင်းကျောက်ကြည်လင်ဖြစ်တယ်, ဒါလှိုဆားကစ်ကသူတို့ကိုထည့်သွင်းကြည်လင်လှိုအဖြစ်လူသိများပေမယ့် polycrystalline ကြွေထည်အပါအဝင်အခြားများကို piezoelectric ပစ္စည်းများအလားတူဆားကစ်အတွက်အသုံးပြုကြသည်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
တစ်ဦးကကြည်လင်လှို, လင်းကျောက်ကျောက်သလင်းနှင့်ဖန်ဆင်းအထူးသဖြင့်တဦးတည်း, ဗို့အားဟာကြည်လင်အနီးရှိသို့မဟုတ်တခုတခုအပေါ်မှာလျှပ်ကူးပစ္စည်းမှလျှောက်ထားသောအခါလျှပ်စစ်လယ်ကွင်းများကပုံပျက်ခံရသဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဤသည်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု electrostriction သို့မဟုတ်ပြောင်းပြန် piezoelectric အဖြစ်လူသိများသည်။ လယ်ပြင်ကိုဖယ်ရှားနေသည်သောအခါ, လင်းကျောက် - တတိကျသောကြိမ်နှုန်းအတွက် oscillates ရာ - ကယင်း၏ယခင်ပုံသဏ္ဍာန်ပြန်လည်ရောက်ရှိအဖြစ်လျှပ်စစ်လယ်ကိုထုတ်ပေး, ဤတစ်ဗို့ generate နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါရလဒ်တစ်ခုလင်းကျောက်ကြည်လင်တစ်ခု RLC ဆားကစ်များကဲ့သို့ပြုမူသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
Quartz crystals megahertz ရာပေါင်းများစွာမှ kilohertz အနည်းငယ်သောင်းချီထံမှကြိမ်နှုန်းများအတွက်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ နှစ်ယောက်ထက်ပိုဘီလီယံခန့် crystals သည်နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ အများစုမှာထိုကဲ့သို့နာရီ, နာရီ, ရေဒီယို, ကွန်ပျူတာများနှင့်ဆဲလ်ဖုန်းအဖြစ်စားသုံးသူ device များအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ Quartz crystals လည်းထိုကဲ့သို့သောကောင်တာ, signal ကိုမီးစက်နှင့် oscilloscopes အဖြစ်စမ်းသပ်နှင့်တိုင်းတာခြင်းကိရိယာတန်ဆာပလာအတွင်း၌တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
Active ကို Crystal လှို
ဆလင်ဒါ Crystal လှို
patch Active ကို Crystal လှို
patch တွေမှာ Passive Crystal လှို
inductors / သံလိုက်ပုတီး / Transformers
တစ်ဦး inductors လည်းတစ်ကွိုင်, နင်စေသို့မဟုတ်ဓာတ်ပေါင်းဖိုကိုခေါ်လျှပ်စစ်လက်ရှိကမှတဆင့်စီးဆင်းသည့်အခါတစ်ဦးသံလိုက်စက်ကွင်းစွမ်းအင်သိုလှောင်တဲ့ passive Two-terminal ကိုလျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး inductors ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦး core ကိုလှည့်ပတ်နေတဲ့ကွိုင်သို့အနာတစ်ခု insulator တွင်လည်းဝါယာကြိုးပါဝင်ပါသည်။
သံလိုက်ပုတီးမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းဆူညံသံဖိနှိပ်နှင့် signal ကိုလိုင်း, ပါဝါလိုင်းများအပေါ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နှုန်းကိုမြင့်တက်နှင့်လည်း electrostatic ပဲမျိုးစုံကိုစုပ်ယူနိုင်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ သံလိုက်ပုတီးထိုကဲ့သို့သောအချို့ RF ဆားကစ်, PLL, လှိုဆားကစ်များနှင့်ပါဝါထောက်ပံ့ရေး၏ input ကိုစိတျအပိုငျးမှသံလိုက်ပုတီးကိုထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်သည့်အစွန်းရောက်အမြင့်ဆုံးကြိမ်နှုန်းမှတ်ဉာဏ်ဆားကစ် (စသည်တို့ကို DDRSDRAM, RAMBUS,), အဖြစ်လှိုင်းနှုန်းသည် UHF အချက်ပြမှုများ, ကိုစုပ်ယူနိုင်ရန်အသုံးပြုကြသည်။ အဆိုပါသံလိုက်ပုတီးအပြိုင်ခုခံနှင့် induction ညီမျှတည်းဟူသောအမြင့်ဆုံးတွန်းလှန် permeability ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ခုခံတန်ဖိုးနှင့် induction တန်ဖိုးကိုကြိမ်နှုန်းတွေနဲ့ခြားနားသည်။
Transformers ရိုးရှင်းစွာသူတို့ကိုအကြားခိုင်မာတဲ့အပြန်အလှန်နားချင်းဆက်မှီနှစ်ခု inductors ဖြစ်ကြသည်။ Step-Down ထရန်စဖော်မာလျော့နည်းအန္တရာယ်များနှင့်လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အိမ်ထောင်စုအတွက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့ကြောင်းတစ်ခုလွှဲခွင်ဖို့ input ကိုပါဝါအရင်းအမြစ်ကနေဗို့အားလျှော့ချပေးပါတယ်။ Step-up, ထရန်စဖော်မာပါဝါလိုင်းများရှည်လျားသောအကွာအဝေးကျော်ကပိုထိရောက်ဂီယာများအတွက်ဗို့အားကိုတိုးမြှင့်။ Transformers AC ပါဝါ၏ဖြန့်ဖြူးဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
chromatic Ring ကို inductors
DR သံလိုက် Core
Net ကဆိပ်ကမ်း Transformer
Power က inductors
XIDA အီလက်ထရွန်းနစ်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောနည်းပညာထုတ်ကုန်တွေနဲ့ပိုပြီးဆန်းသစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းန့်အသတ်ကိုပိုမိုကွဲပြားခြားနားသောဖောက်သည်ပေးရန်ကျူးလွန်နေသည်။ ကျနော်တို့ကိုအောင်မြင်စွာဒစ်ဂျစ်တယ် multimeter, မော်တော်ကားကိရိယာ, လျှပ်စစ်စမ်းသပ်ခြင်းတူရိယာ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိရိယာ, ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိရိယာ, ယေဘုယျ tester, တိုင်းတာခြင်းများနှင့်စံကိုက်ညှိတူရိယာနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်သိုလှောင်မှု oscilloscopes နှင့်အခြား 10 ဦး၏ကမ္ဘာ့စျေးကွက်မှအဓိကအမျိုးအစားတစ်ခုကျယ်ပြန့်ဖြန့်ချိခဲ့ကြ ထုတ်ကုန်နှင့်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုး၏စီးရီးစေနှင့်အပြည့်အဝကွဲပြားခြားနားသောဖောက်သည်များ၏ထူးခြားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဆက်လက်။
Benchtop ဒစ်ဂျစ်တယ် Multimeters
component စမ်းသပ်ခြင်း Tools များ
ဒစ်ဂျစ်တယ် Clamp မီတာ
လျှပ်စစ်စွမ်းအား Tools များ
စက်မှုဒစ်ဂျစ်တယ် Clamp မီတာ
စက်မှုစစ်မှန်သော RMS အ Multimeters
မှာ IR သာမိုမီတာ
layout နှင့်တိုင်းတာခြင်း Tools များ
Power က Sockets
ultra ဖော့စဖရပ် Oscilloscopes
: sensors ယေဘုယျအားဖြင့်အောက်ပါလေးအမျိုးအစားများထဲမှထဲသို့ကျ
တစ်ဦးကဖိအားအာရုံခံကိရိယာပုံမှန်အားဖြင့်ဓါတ်ငွေ့သို့မဟုတ်အရည်၏ဖိအားတိုင်းတာသည်။ သူတို့ကတိုးချဲ့နေတဲ့အရည်သို့မဟုတ်ဓါတ်ငွေ့ရပ်တန့်ရန်မလိုအပ်သောအင်အား၏တစ်ဦး function ကိုအဖြစ်ထုတ်လုပ်ပြီးဖိအား၏ရလဒ်အဖြစ်အီလက်ထရောနစ် signal ကိုထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် operate ။ ဖိအားအာရုံခံကိရိယာကိုလည်းမကြာခဏသည်အခြားအမည်များအကြား, ဖိအား transducers, ဖိအားက transmitter, piezometers နဲ့ဖိအားညွှန်းကိန်းဟုခေါ်ကြသည်။ သူတို့ကအများအားထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး applications များအတွက်အသုံးပြုကြသည်။
motion နဲ့ရာထူး Sensors
တစ်ဦးကရွေ့လျားမှုနှင့်အနေအထားကိုအာရုံခံအကြွင်းမဲ့အာဏာဝေါဟာရများ (အကြွင်းမဲ့အာဏာအနေအထားကိုအာရုံခံကိရိယာ) တွင်, သို့မဟုတ်ဆွေမျိုးဝေါဟာရများ (ဆွေမျိုးသို့မဟုတ်ရွှေ့ပြောင်းခံရအာရုံခံကိရိယာ) တွင်လည်းကောင်း, အနေအထားများတိုင်းတာခြင်းဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ motion သို့မဟုတ်အနေအထားကိုအာရုံခံကိရိယာများ, angular အနေအထားအပြောင်းအလဲအဖြစ် Multi-ဝင်ရိုးအနေအထားအပြောင်းအလဲများကိုကိရိယာ၏ linear အနေအထား (linear အနေအထားကိုအာရုံခံကိရိယာ) ကိုတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ ဝတ်စရာများနှင့်လက်ကိုင် IoT ပစ္စည်းတွေအတွက်အသုံးပြုလူကြိုက်အများဆုံးများထဲတွင် accelerometer နှင့် gyroscope အာရုံခံကိရိယာများဖြစ်ကြသည်။
optical sensor များအနေနဲ့တူရိယာများကဖတ်လို့လွယ်ကြောင်းအီလက်ထရွန်းနစ်အချက်ပြမှုသို့, တစ်ဦးထွန်းလင်းအလင်း, ဒါမှမဟုတ်အလငျး၌အပြောင်းအလဲတစ်ခုပြောင်း။ ထို့အပြင် photoelectric အာရုံခံကိရိယာကိုခေါ်ဒါတွေကအာရုံခံကိရိယာများ, ထို့နောက်တစ်ဦးအရာဝတ္ထု၏တည်ရှိမှုနှင့် positional ရှိနေခြင်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ကြသည်။ optical sensor များစက်မှုဇုန်အလိုအလျောက် applications များအဖြစ်စီးပွားဖြစ်ထုတ်ကုန်များကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ လူကြိုက်အများဆုံးများထဲတွင် fiber optic အာရုံခံကိရိယာများ, နီးကပ်အာရုံခံကိရိယာများနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအလင်းကုလားကာအာရုံခံကိရိယာများဖြစ်ကြသည်။
အပူအာရုံခံကိရိယာအပူချိန်သို့မဟုတ်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုတုံ့ပြန်အတွက်လျှပ်စစ် signal ကိုထုတ်လုပ်ကြောင်း devices များဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကတစ်ဦးအကောင်းဆုံးအပူချိန်လည်ပတ်မှုအကွာအဝေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ feeback လိုအပ်ကြောင်းစက်မှု application များအတွက်အရေးပါသောဖြစ်ကြသည်။ မဆို Over-အပူချိန်ဖတ်ထို့နောက်အသက်တာကိုတိုးချဲ့ပြီးဘေးကင်းလုံခြုံအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စက်၏ shutdown ချနိုင်ပါသည်။ အပူအာရုံခံကိရိယာ၏နှစ်ခုအဓိကအမျိုးအစားများကိုအပူချိန်အာရုံခံကိရိယာများနှင့်စိုထိုင်းဆအာရုံခံကိရိယာများဖြစ်ကြသည်။
touch ကို Chip
drivers ဆက်ကပ်အပ်နှံထားက transmitter ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကတစ်ဦးအထူးသဖြင့်နည်းပညာမိသားစုသို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ရေးစံကားမောင်းမှုအတွက် optimized အပေါင်းတို့နှင့်တကွသက်ဆိုင်ရာ protocols များနှင့်လျှပ်စစ်လိုအပ်ချက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်များကပိုကြီးတဲ့စနစ်၏ဒီဇိုင်းကိုရိုးရှင်းနေကြပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, တစ်ဦးနဲ့ LED မောင်း CPU ကို / AP GPIOs နှင့်ယာဉ်မောင်းအစိတ်အပိုင်းပေါ်သို့အနေဖြင့်မြင့်သောလက်ရှိအရင်းအမြစ် / စုပ်တောင်းဆိုချက်များကို offloads ။ interface အစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ဦးဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကိုအကောင်အထည်ဖေါ်ထပ်ခါထပ်ခါအဖြစ်ပြုမူရန်အသုံးပြုနိုင်စွယ်စုံအစိတ်အပိုင်းများနေသောယာဉ်မောင်းများနှင့်အသံဖမ်း (transceiver), င်နိုင်ပါသည်။
Drive ကို Chip
MCU စောင့်ကြည့် Chip
ဆိပ်ကမ်းတိုးချဲ့ chip ကို
real-time နာရီ Chip
အီလက်ထရွန်းနစ်ခုနှစ်တွင်တစ်ဦး opto-အထီးကျန်မှုတွေကိုလည်းရရှိနိုင်သည့် signal.Commercially လက်ခံရရှိစနစ်ထိခိုက်စေခြင်းမှမြင့်မားသော voltages ကို light.Opto-အထီးကျန်မှုတွေကို အသုံးပြု. နှစ်ခုအထီးကျန်ဆားကစ်များအကြားလျှပ်စစ်အချက်ပြလွှဲပြောင်းတဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုကာကွယ်တားဆီးသည်တစ်ဦး optocoupler, photocoupler, ဒါမှမဟုတ် optical အထီးကျန်မှုတွေကိုခေါ် opto-အထီးကျန်မှုတွေကိုတက် 25 ကေဗွီ / μsအထိအမြန်နှုန်းနှင့်အတူ 10 kVand ဗို့အားယာယီမှ input ကို-to-output ကို voltages ကိုဆီးတား။
opto-အထီးကျန်မှုတွေတစ်ဘုံအမျိုးအစားတစ်ခုနဲ့ LED နှင့်အတူတူပင်ဒီလိုပါပဲအထုပ်ထဲမှာ phototransistor ပါဝင်ပါသည်။ အရင်းအမြစ်-sensor ကိုပေါင်းစပ်၏အခြားအမျိုးအစားများကို LED-photodiode, LED-LASCR နှင့်ဆီမီးခွက်-photoresistor အားလုံးပါဝင်သည်။ အများအားဖြင့် opto-အထီးကျန်မှုတွေလွှဲပြောင်း (On-ချွတ်) ဒီဂျစ်တယ်အချက်ပြမှုများ, ဒါပေမယ့်တချို့နည်းစနစ်သူတို့ကို Analog စအချက်ပြမှုများနှင့်အတူအသုံးပြုရရန်ခွင့်ပြုသည်။
အလင်းကို emitting diode အစိုင်အခဲကိစ္စ, မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တစ်ဆီမီးကွန်ဒတ်တာမှတဆင့်အလင်းထုတ်လုပ်ရန် Solid-State အလင်းရောင်နည်းပညာကိုအသုံးချရန်။ ဤ (ဓာတ်ငွေ့မှတဆင့်) ထိုသို့သောအက်ဒီဆင်တီထွင်မီးသီး (ကလေဟာနယ်မှတဆင့်) သို့မဟုတ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းချောင်းမီးသီးကဲ့သို့သောအခြားအလင်းရင်းမြစ်များမှမပါဘဲသူတို့ကိုသတ်မှတ်။ အလင်းထုတ်လုပ်မှု၏အခြေခံယန္တရား Band-to-Band recombination သို့မဟုတ်ဓါတ်ရောင်ခြည်များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်။
တိုက်ရိုက် INSERT Optocoupler
LCD ကိုပြရန် Module
LED ဒစ်ဂျစ်တယ် Tube
OLED Display ကို Module